काठमाडौंमा बिहानै पानी पर्‍यो, कहिलेसम्म मौसम खराब रहन्छ ? – Sandesh Press
काठमाडौंमा बिहानै पानी पर्‍यो, कहिलेसम्म मौसम खराब रहन्छ ?
January 4, 2021 148
काठमाडौंमा आज बिहान हल्का पानी परेको छ । बादल लाग्ने र हल्का पानी पर्ने क्रम आगामी बुधबारसम्मै जारी रहने मौसमविद समिर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘पानी ठूलोचाहिँ पर्दैन तर आज दिनभरि नै काठमाडौंमा मौसम खराब रहन्छ, घाम लाग्ने सम्भावना कमै छ,’ मौसमविद श्रेष्ठले बताए ।
हाल पश्चिमी वायुमा विकसित भएको निम्नचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण देशका धेरैजसो भूभागहरूमा बदली, वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । यो प्रणाली पुस २२ गते (बुधबार) देखि कमजोर हुँदै जाने पूर्वानुमान छ ।आज बिहान हल्का पानी परेको छ । बादल लाग्ने र हल्का पानी पर्ने क्रम आगामी बुधबारसम्मै जारी रहने मौसमविद समिर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
हाल पश्चिमी वायुमा विकसित भएको निम्नचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण देशका धेरैजसो भूभागहरूमा बदली, वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । यो प्रणाली पुस २२ गते (बुधबार) देखि कमजोर हुँदै जाने पूर्वानुमान छ ।
Prevनेपालमा टिकटक बन्द हुदै, यस्तो छ कारण, टिकटक बन्द गर्नु
काठमाडौको यो ठाउँमा पाइन्छ ६५ रुपैयामा खाना
हार्दिक श्रद्धाञ्जली दाङमा टिकटक बनाउँदा पुलबाट बजारिएका युवकको उपचारका क्रममा अस्पतालमा मृत्यु
‘फुलबुट्टे सारी’को लेजेन्डरी भर्जनमा मदनकृष्णको स्वर, भिडियोमा उनको र मिथिलाको रोमान्स